"Bingo" - kuyini? Lona umdlalo ezidumile ithuba lapho umphumela kuncike kuphela okungenzeka kanye inhlanhla. Ukuze bahlanganyele kubalulekile ukuthenga ikhadi ekhethekile, futhi ukunqoba udinga ukuba inhlanhla kancane. Lolu hlobo ilotho ngaso yizigidi nabalandeli emhlabeni jikelele webhingo.
Njengoba kunjalo kubo bonke abanye umdlalo, kukhona izinguqulo ezahlukene kanye nezindlela ezahlukene nezinketho okuwina. Ngokwesibonelo, ukudlala inguqulo ye-UK, okuthiwa "90-ibhola Bingo." Lolu hlobo kuhlukile kancane kusukela version American, okuthiwa "75-Ball Bingo."
Umlando "Bingo": lapho iqala
On umbuzo "Bingo" - okungukuthi, futhi lapho kuba khona, akunakwenzeka ukuphendula ngokungananazi. Ukugembula ine eminyakeni engaphezu kwenkulungwane, eziningi zazo ziye savela ngesikhathi, wanyamalala, uvele entsha. Lo mdlalo "Bingo" libhekisela inani ilotho imidlalo zasakazekela kulo lonke elaseYurophu ekhulwini le-16. Ambikele zincike ukuqondana izinombolo okungahleliwe. Inqubo kancane kancane ushintsho ukuze umdlalo wanamuhla uhlobo lwayo zenzeka phakathi namakhulu eminyaka amaningana.
Umvubukuli IsiZulu Dzhon Stivens wahambela Mexico e-1838, wachaza ngokuningiliziwe umdlalo lasendulo "la ilotho." Ukuhola wakhipha amabhola olunezinombolo kusukela esikhwameni ngesikhathi, futhi ngokuthi isibalo. Abadlali ayethwele ezicucwini zamaphepha, eyayibonakala zikleliswe imigqa kwamadijithi ezinhlanu inombolo ngayinye kusuka 1 kuya 90. Lapho efaka i izinombolo bahambisa okusanhlamvu nesinkwa ebhokisini elifanele. Eyokuqala ayehlanganisa yonke umugqa iwine.
Kungani umdlalo kangaka okuthiwa?
Kukholakala ukuthi igama umdlalo ekhuphuka nge American ithoyizi umdayisi okuthiwa u-Edwin Lowe. Wasebenzisa le eside phakathi ukuqaliswa amathikithi ayatholakala emakhemisi. Kodwa kungani wasebenzisa leli gama? Omunye Lowe engumthengisi waphawula umdlalo ngesikhathi fair eGeorgia ngo-1929. Isici esiphawulekayo kwakuwukuthi kuvalwe izinombolo iphepha wasebenzisa ubhontshisi. Ngenxa umdlalo injabulo eyodwa Lady ngephutha Wamemeza "Bingo!" (Ukuhumusha "Beano" - ubhontshisi). Lowe walithanda izwi ukuthi babesebenzisa lona ukuze umkhiqizo wakhe. Kunezinye ezizathwini mayelana ukuvela lo mqondo, kodwa indaba ubhontshisi iyona ozwakalayo kakhulu.
Ukugembula kubo bonke
Lo mdlalo "Bingo" - uhlobo lokuzijabulisa ukugembula, yezinjongo eziyinhloko okuyinto yokuchitha isizungu kumnandi, umuzwa, kokuhlola, ukuhlolwa futhi sikufisela inhlanhla, yebo, ematfuba ngokuwina. Kuyinto kungalungile wazi ukuthi lo mdlalo uye wathatha izwe isivunguvungu futhi adume eminyakeni yamuva. Sezadlula lezo nsuku lapho kwakucatshangwa lot lokuzijabulisa ogogo namakhosikazi. Ngaleso sikhathi samanje, ikakhulukazi emazweni aseNtshonalanga, kukhona inani elikhulu izikhungo esikhethekile umdlalo we "Bingo", emhlabeni wonke kukhona zezinhlobo zonke izinhlobo lotto, kuhlanganise online. Abesilisa nabesifazane, abasha nabadala, nayo yonke imikhakha yomphakathi manje uyazi ukuthi udlala kanjani "Bingo", wenze njalo.
Le nguqulo electronic umdlalo
Le nguqulo electronic "Bingo" kuyinto bendabuko efanayo, kodwa ngaphandle amathikithi paper bendabuko. Esikhundleni amashidi wephepha umshini ekhethekile electronic ukurekhoda izinombolo abadlali, lokhu okubizwa ngokuthi amakhadi yemidlalo yebhingo umdlalo semi-automatic. Ngokugcwele mode othomathikhi ingadlalwa kwi imishini slot, lapho umshini ikhetha inombolo uqobo sinquma ambikele.
Yiziphi emihle nemibi electronic "Bingo"? Okokuqala, imidlalo yama-computer ukunikeza ithuba lokubamba iqhaza abantu okungenzeka ngaphambilini engakwazi ukwenza lokho uma (isibonelo, abantu abakhubazekile kanye netinhlobo letehlukehlukene ukukhubazeka). Okwesibili, le nguqulo yakhelwe yokunakekela ukwanda kwesikhathi esizayo izilaleli. Kule minyaka eyishumi edlule inani labantu abane-siqu yobuchwepheshe liye landa kakhulu. Njengoba sekunama-version inthanethi "Bingo" umdlalo manje sekuyinto okwamukelekayo emphakathini emhlabeni wonke. Ngokuqondene nemiphumela ethile engathandeki, abanayo okuningi ukukhuluma ngazo.
Ingabe sicabanga womuntu isici lokususa? Ngoba umuntu ngaphezulu choice encomekayo uyindoda izinombolo, othile - ikhompyutha, noma kunjalo, kodwa kukhona lokuzikhethela, kodwa isikhathi esingakanani liyokuma, kuyocaca ngokuhamba kwesikhathi.
Game "Bingo" izingane
"Bingo" - kuyini? Ngokwesiko, le umdlalo kubhekwa ukugembula. Nokho, kukhona izinhlobonhlobo eziningi lokhu okuhlangenwe nakho okujabulisayo kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Lokhu kungaba enkulu ibhodi umdlalo wonke umndeni noma amakhadi ngoba umdlalo "Bingo", okungaba ikhonze njengomPristi nakho zentuthuko kanye ukufunda izingane. Lawa makhadi makhulu futhi sikwele. Ziyakwazi izinombolo ezinkulu ingaboniswa, imibala zeJiyomethri, izilwane nokunye okuningi. Lokhu kwenza umdlalo ezithakazelisayo futhi bezijabulisa izingane. Zingase isetshenziswe njengoba imithetho evamile (ukumboza wonke ibalazwe, umugqa owodwa noma ikholomu), futhi yasungulwa ngokukhethekile. Ukudlala umdlalo ngale ndlela, ungafunda ukuthi ibone izinto ezithile ukufundisa imibala nobujamo nokunye.
"Bingo" Izingane ezindala kungenziwa aguqulelwe ekutadisheni izilimi zakwamanye amazwe, ngcono ulwazimagama futhi ukwandisa indlela abheka ngayo izinto jikelele. izingane zanamhlanje abakwazi ukuphila ngaphandle amaphilisi kanye amafoni, ukuze ukwazi ukuhlanganisa ezimnandi futhi ewusizo, njengoba kungenzeka ukulanda omunye eziningi izicelo mahhala asathuthuka imidlalo mobile "Bingo".
Kungani bamemeze bathi "Bingo!"
"Bingo" - kuyini? Ngomqondo yendabuko, kuba emdlalweni wenhlanhla, esebenzisa amakhadi ephrintwa ngaphambili nenombolo 5 phezu 5-chungechunge. Lapho efaka i Kuyi-inombolo ekhadini ewela phandle, umdlalo uphela umuntu etholwe iphethini predetermined kumephu. Owinile kuleli cala, uthi igama elithi "Bingo!", Ngaleyo ndlela ngokuvumela bonke abadlali abakhona kule umklomelo. Zonke amathikithi wahlola ukuze siqiniseke ukuthi umuntu akuyona into embi-ke kwathiwa isiqinisekiso esemthethweni ngokuwina umklomelo ngemali kumenyezelwa bese eqala umdlalo omusha.
"Bingo" - ngumdlalo wokuthatha amathuba, awunazo eyinkimbinkimbi ukuze ufanelekele yokwazi ukuthi kufanele wenzeni. Izazi eziningi emkhakheni ukugembula sikubheka njengempahla ilotho, futhi ukholwa ukuthi azikho izindlela imfihlo noma amasu ukuthi ngabe isiqinisekiso ukunqoba.
Kuyini msindo amandla ziyini?
Lungiselela isoseji okuzenzela ku inhlama kuhhavini.
I-stone lemsit - impahla ehlukile yemvelo
Alain: umsuka igama. Umlando, imfihlakalo kanye kwebalingisi of igama Alena